यी स्मार्टफोनहरुमा आजदेखि ह्वाट्सएप नचल्ने, कतै तपाईँको पनि पर्यो कि ? - Technology Khabar
» यी स्मार्टफोनहरुमा आजदेखि ह्वाट्सएप नचल्ने, कतै तपाईँको पनि पर्यो कि ?
आज जनवरी १ २०२१ अर्थात अंग्रेजी नयाँ वर्ष। धेरै पुराना चीजहरू नयाँ वर्षको साथमा छोडिने गर्दछ। नयाँ वर्षका साथमा लोकप्रिय मेसेजिङ्ग एप ह्वाट्सएपले पनि पुरानो अपरेटिङ्ग प्रणालीको लागि आफ्नो सपोर्ट बन्द गरेको छ ।
यस अघि नै कम्पनीले जारी गरेको स्मार्टफोनको सूचीमा ह्वाट्सएपले जनवरी १ देखि काम गर्न रोकिने स्मार्टफोनहरुको बारेमा जानकारी दिएको थियो । अब आजदेखि ह्वाट्सएपले आईओएस ९ र एन्ड्रोइड ४.०.३ अपरेटिङ्ग सिस्टम भन्दा पुराना सिस्टम भएका स्मार्टफोनहरूमा काम गर्ने छैन।
कम्पनीका अनुसार, ह्वाट्सएपका सबै सुविधाहरू प्रयोग गर्न आईफोन प्रयोगकर्ताहरूले आईओएस ९ वा त्यसभन्दा माथिको र एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूले ४.०.३ वा त्यसभन्दा माथिको संस्करण प्रयोग गर्नुपर्नेछ। नत्र जनवरी १ आजदेखि ह्वाट्सएप स्मार्टफोनमा काम गर्न रोकिनेछ।
यस्ता नचल्ने अधिकांश फोनहरु निकै पुराना र करिब करिब आउटडेटेड भईसकेका छन् । त्यसैले धेरै प्रयोगकर्ताहरु प्रभावित नहुने अनुमान गरिएको छ । तरपनि यसले निश्चयपनि असर भने पार्नेछ ।
आईफोनका यी मोडेलहरूमा ह्वाट्सएपले काम गर्दैन
एप्पलको आईफोन ४, आईफोन ४ एस, आईफोन ५, आईफोन ५ एस, आईफोन ६, र आईफोन ६ एस अपरेटिंग सिस्टम आईओएस ९ वा त्यसभन्दा माथिको सिस्टमका साथ अपडेट गर्नुपर्नेछ, यदि गरेन भने यी स्मार्टफोनहरूमा ह्वाट्सएपले काम गर्दैन।
यद्यपि आईफोन ६ एस, ६एस प्लस, र आईफोन एसईलाई आईओएस १४ का साथ अपडेट गर्न सकिन्छ।
यी एन्ड्रोइड फोनमा पनि व्हाट्सएप बन्द हुनेछ
त्यस्ता एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू जसमा एन्ड्रोइड ४.०.३ छ, त्यसमा ह्वाट्सएपले काम गर्दैन् । यी स्मार्टफोनहरूमा एचटीसी डिजायर, एलजी अप्टिमस ब्ल्याक, मोटोरोला ड्रोइड रेजर, सामसङ ग्यालेक्सी एस २ जस्ता मोडेलहरू समावेश गरिएको छ।
यसरी थाहा पाउनुस् आईफोन र एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूले सिस्टम
पहिले सेटिंग्समा जानुहोस्। त्यसपछि जनरलमा ट्याप गर्नुहोस्। अब इन्फर्मेशनमा ट्याप गर्ने बित्तिकै तपाईँले अपरेटिङ्ग सिस्टमको विवरणहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। अर्कोतर्फ, यदि तपाईं एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने, पहिले सेटिग्समा जानुहोस्। अब तपाई अबाउन फोन भन्ने स्थानमा गएर फोनको अपरेटिङ्ग प्रणालीको बारे पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ ।
अब तपाईँको फोनको सिस्टम थाहा पाएसँगै त्यसलाई अपडेट गर्नुहोस वा सिस्टम अपडेट हुँदैन भने नयाँ फोन किन्नुहोस् । नत्र तपाईँको आजैदेखि स्मार्टफोनमा ह्वाट्सएप चल्नेछैन् ।